သမီးစံ: September 2011
ဘလော့ဂါသတင်းထောက် သမီးစံနှင့် အမှတ်ရဖွယ် Anniversary တစ်ခု (၂)
"ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ ဆည်စီမံကိန်းအား နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးနှင့် အဖွဲ့က တည်ဆောက်ရန် ရပ်နားလိုက်သည်" ဟု ကြားသိရသည့်အတွက် ဘလော့ဂါ မောင်နှမ များနှင့်ထပ်တူ သမီးစံ မှ အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက် မိပါသည်။
ချစ်သော" ဧရာဝတီ" မြစ်ကြီး.. မြန်မာပြည်သားများနှင့်အတူ
အိမ်က "အင်တာပျက်"ကို ရွာသာကြီးက ပြန်ခေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျန်နေသေးတဲ့ ဇာတ်သိမ်း ပိုင်း အဲလေ နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေး ဆက်ရေးပါ့မယ်။း))
ဆက်လက်ပြီး..ပရိတ်သတ်တစ်ဦးမှ ကဗျာ လေးတစ်ပုဒ် ရွတ်ဆိုတာ
ပါဝင်ဆွေးနွေး သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
(အမှန်တကယ်တော့ ဓာတ်ပုံရှင်မှာ သမီးစံ မသိလိုက်တဲ့ စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။)
နောက်ထပ်ကဏ္ဍခွဲလေးတစ်ခုကတော့ “Positive Pages ”အမည်ရတဲ့ HIV ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက် ဖတ်ပြပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကဏ္ဍလေးကိုတော့ စာရေးဆရာမ “သိသု” မှ ဝေဒနာသည် “မဗေဒါလှိုင်း”မကွယ်လွန်မီ ရေးပို့ခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုလေးကို အသံထွက်ရွတ်ပြပြီး တင်ဆက်သွားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး..ပရိတ်သတ်အတွက် ငါးမိနစ်ကဏ္ဍ မှာ တက်ရောက်လာသူ သွားဖွား၊မီးယပ် ဆရာဝန်ကြီးမှ လူငယ်တွေကို HIV ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အချက်တွေကို ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။
ဆက်လက်ဆက်သွားတာကတော့ “ကဗျာ” ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်
သက်ဝင် မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ “မာတိကာ” ဆရာ“ညီမင်းညို” မှ ဂစ်တာဆရာတစ်ဦးနှင့် စာရေးဆရာ၊ကဗျာဆရာ “တာရာမင်းဝေ” ရဲ့ ကဗျာရှည်အား သံစဉ်များဖြင့် ရွတ်ပြသွားပါတယ်။ နှစ်သက်မိတဲ့ စာကြောင်းလေးတစ်ခု ကတော့."ဥပုဒ်သည် သီလကျိုးတော့ ဘုရားရှိခိုးရင်း ရှက်နေသည်"တဲ့..။
နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ ဘလော့ဂါများအတွက် “Blog Digest” အစီအစဉ်ပါပဲရှင်
Blog Digest အစီအစဉ်အား တာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးသူ များကတော့ အပြင်လောကမှာကော အွန်လိုင်း ဘလော့ စာမျက်နှာများတွင်ပါ စာရေးဆရာမ များဖြစ်ကြတဲ့ “အစ်မ မြသွေးနီ နဲ့ အစ်မ မြလေးသျှင်” တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဏ္ဍလေးမှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စာတွေရေးသားနေကြတဲ့ ဘလော့ဂါများရဲ့အကောင်းဆုံး စာမျက်နှာများကို စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ်များနဲ့ မိတ်ဆက် တင်ပြပေးတဲ့ ကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးအစ်မ မြသွေးနီ နှင့် အစ်မ မြလေးသျှင် တို့မှ “ဖူးငုံ”မဂ္ဂဇင်းမှာ လစဉ်အလိုက် ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဘလော့ဂါများရဲ့ ပို့စ်များကို အမြည်းအနေနှင့် Notes ထုတ်ကာ ဖတ်ပြ သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်ရှင်။
ဖတ်ပြခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂါများရဲ့ ပို့စ်များကတော့…
ဘလော့ဂါ မချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) ရဲ့ “အပင်နှင့်တူသောသူများ” ဗီစီဒီ အဲလေ Essayး)
ဘလော့ဂါ ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရဲ့ “ကမ္ဘာပျက်ခြင်း” ၀တ္ထု
ဘလော့ဂါ အစ်မနှင်းနဲ့မာယာရဲ့ “ဆွမ်းအုပ်ကြီး” Essay
အစ်မနှင်းနဲ့မာယာရဲ့ projector ပေါ်က ဘလော့ပို့စ်ကိုရိုက်လိုက်တာ ရှေ့ကနတ်သားတစ်ပါးရဲ့ ဦးခေါင်းကြီးကင်မရာထဲ ၀င်လာလို့သေသေချာမရိုက်လိုက်ရပါဘူးရှင့်။ဒါကြောင့်မူရင်းပို့စ်ကိုပဲ screen ဖမ်းပြီး တင်ပေးလိုက်ရတာပါ။(နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရိုက်ဖို့မမှီတော့လို့ပါရှင်)
(နောက်ထပ် ဘလော့ဂါများရဲ့ အက်ဆေးနှစ်ပုဒ် ကျန်ပါသေးတယ်..။ သတင်းထောက်ရဲ့ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ဖော်မပြနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ကြပါရန်………)
ဒီသတင်းထောက်တော့ “များ”နေပြီနော်း)))(ချောင်းရိုက်ခံရတော့မယ်)
ဒါကတော့ “ရသ၀တ္ထုတိုရွေးချယ်ခြင်း”ဘလော့မှာ“၂၀၁၁-ဧပြီ”လအတွက် ပထမဆုရရှိခဲ့တဲ့အစ်မမြသွေးနီရဲ့ “သမီးရဲ့မျက်လုံးလေး” အမည်ရှိ ၀တ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီး ပရိတ်သတ်အတွက် “ငါးမိနစ်ကဏ္ဍ”မှာ
စာရေးဆရာမ တစ်ဖြစ်လည်း ဘလော့ဂါ အစ်မချောအိမာန်(မန္တလေး)မှ “လူငယ်”များအနေဖြင့်.မိမိ တတ်မြောက်ထားသောနည်းပညာများ ကို “အလွဲသုံးစား” မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ယခုလောလောဆယ်တွင် ဘလော့ဂါအများစုကြုံတွေ့နေရသောစီဘောက်များမှ
“ယဉ်ကျေးမှု”မရှိသောစာသားများနှင့်ပတ်သတ်၍လည်းမိမိ ဘလော့မှ စီဘောက်ကို ဖြုတ်ထား ရသည်အထိ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ် နေရကြောင်း၊ “ကိုယ်ကျင့်တရား” ကို အလေးထားသည့် အတွက်. မိတ်ဆွေ ဘလော့ဂါများထံတွင် မိမိအမည်ကို အသုံးပြုကာ“မယဉ်ကျေး” သောစာများ ရေးသားထားခဲ့ပါက ချောအိမာန်(မန္တလေး)မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေးကာ ပါဝင် ဆွေးနွေး သွားပါတယ်ရှင်။
အကြောင်းအရာကတော့ လူငယ်တွေကို စာများများ ဖတ်စေချင်တဲ့အကြောင်း.၊မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း စာကြည့်တိုက်များ ဒီ့ထက် ပေါများစေလိုကြောင်း(မှတ်မိသမျှ) စသည်ဖြင့် လူငယ်ပီပီတက်ကြွစွာ ဟောပြော သွားပါတယ်။
ဆက်လက်သွားတာကတော့ “အခြားကဏ္ဍများ” ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီကဏ္ဍလေးမှာတော့ ဆရာဟန်ဇော်နှင့်ဆရာမယုယတို့မှ ထွေရာလေးပါးများကို ဟာသနှောကာ ပြောပြီးနောက် ဆရာဝေမိုးနိုင် နဲ့အင်တာဗျူးကာ ပရိတ်သတ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ “ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ)” ဆိုသည်မှာ အသက် ဆယ့်ခြောက်နှစ်သာရှိသေးတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ပြီး ၀တ္ထုတိုလေးများကို အသက် ဆယ့်သုံးနှစ် ကတည်းက စတင်ရေးသားခဲ့တယ် လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ဆရာဝေမိုးနိုင်ဟာဒီဇင်ဘာမှာ ပထမနှစ်စတက်မယ့်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးစလူငယ်လေးပဲရှိသေးတာကိုအံ့သြစွာသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
ဒီဇင်ဘာရောက်မှာ တက်ရမှာဆိုတော့ သမီးစံတို့ကျောင်းဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။း))
အော်တိုလေးဘာလေး ရေးခိုင်းမလို့ပါ… ဟဲဟဲဟဲ )
သမီးစံအနှစ်သက်ဆုံးဝတ္ထုများထဲမှ “မျောက်လက်”၀တ္ထု ပိုင်ရှင် စာရေးဆရာ “မင်းလူ”ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်တင်ဆက်သွားတဲ့ ကဏ္ဍလေးကတော့ “ကြယ်ပွင့်တို့ရဲ့အတိတ်ပုံရိပ်”ဖြစ်ပါတယ်။
စီစဉ်တင်ဆက်သူများကတော့ သရုပ်ဆောင် “ရဲတိုက်”နဲ့Interviewer “မခင်လေးမြင့်”တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတိုက်ကိုတော့သိပြီးမှာပါနော်။မခင်လေးမြင့်ကလည်းစာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ Interviewer တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတိုက် ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းလေးတွေ ဗျူးသွားတာပါ။
လောလောဆယ် ကိုယ်မြင်နေရတာကတော့“ရဲတိုက်”ကို“ဘေးတိုက်” အနေအထားနဲ့ပါ။းP
အယ်ဒီတာ “ဆရာ ဦးမျိုးမြင့်ညိမ်း” မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် အယ်ဒီတာချုပ် "ဆရာဦးဝင်းငြိမ်း" မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပါတယ်။
ဆရာက သူ့ကိုယ်သူ "CEO"မဟုတ်ပါဘူး "SEO" (Sleep Editor) ဖြစ်ကြောင်း
"ဖူးငုံ ဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်း" ရဲ့"ကိုးနှစ်ပြည့်"နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာ ပါဝင်တင်ဆက်သွားကြတဲ့
ဖူးငုံရဲ့ ၀ိုင်းတော်သားများအား အမှတ်တရ လက်ဆောင် ချီးမြှင့်တဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အမှတ်တရ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပါ။
နဖူးပြောင်ပြောင်၊အသားမည်းမည်း၊ပါးစပ်ပြဲပြဲ နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ သိကြပြီးတော်မူတဲ့အတိုင်း ကိုရီးယား မင်းသမီး "ဂျင်ဆန်းမီ"ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။(ရေးရတာ အရသာရှိလိုက်တာ ဟိဟိ)
("မီး" ကိုချောတယ်ပြောရင် "ရေ" အ၀ တိုက်ပါ့မယ် ) :P
"ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်း" ကိုးနှစ်ပြည့်မှသည်...နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် လူငယ်တွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုအဖြစ် အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်ပါစေရန် သမီးစံမှ
ဖူးငုံရဲ့ ၀ိုင်းတော်သားများလည်း ကိုယ်၊စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာနဲ့တာဝန်ကိုယ်စီ
"ဖူးငုံမဂ္ဂဇင်း"ကိုးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားအားကိုယ်တိုင်တက်ရောက်အားပေးခွင့်ရအောင်ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့ အစ်မမြသွေးနီအားလည်းကောင်း၊"အပင်နှင့်တူသောသူများ"ခေါင်းစဉ်အတွက်လင်ခ့်ပေးခဲ့သောအစ်မ ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)အားလည်းကောင်း၊
ဖော်ပြပါ သတင်းများအတွက် ဘလော့ ဂါသတင်း ထောက် သမီးစံအား စပွန်ဆာအဖြစ် ကူညီပံ့ပိုး ပေးကြပါသော "ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းကုမ္မဏီ"နှင့် "တက်တက်ပြောင်" ဂျာနယ်တိုက်မှ တာဝန်ရှိ လူကြီး မင်းများ အားလည်းကောင်း၊ကူညီလိုက်ပါပေးခဲ့သူ သူငယ်ချင်း အားလည်းကောင်း၊ ဖတ်ရှုအားပေးကြကုန် သော ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းများအားလည်းကောင်း အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါရှင်။
Blogger သတင်းထောက် သမီးစံနှင့်အမှတ်ရဖွယ် Anniversary တစ်ခု
ခေါင်းစဉ်ကြီးကတော့ ခန့်ခန့်ကြီးပဲနော်း))
(သတင်းထောက် ငှား ချင်တဲ့သူများရှိရင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်း)
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များထဲမှ တစ်စုံတစ်ခုသော်လည်းကောင်း အများစုသော်လည်းကောင်း မှားယွင်းမှုများ ရှိနေပါက သတင်းထောက် သမီးစံ၏ ပေါ့လျော့မှုကြောင့်ဟုသာ ယူဆပေးစေလိုပါသည်ရှင်။
အသေးစိပ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိချင်ရင်တော့ အစ်မ မြသွေးနီ ရဲ့ ဆိုဒ်မှာ ရှုစားအားပေးနိုင်ကြောင်းပါရှင်...
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က(အတိအကျပြောရရင်တော့ ၂၅-၉-၂၀၁၁ ရက်ပေါ့) သမီးစံပွဲနှစ်ပတ်လည်ပွဲ တစ် ခု ကို တက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အထင်မကြီးပါနဲ့ရှင်... လူကြီးလူကောင်း တစ်ယောက် အနေနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ အစ်မ မြသွေးနီရဲ့ ဘလော့ စာမျက်နှာမှာတွေ့လို့ အစ်မကို(comment ထဲမှာ)မေးကြည့်တော့ “လာလို့ရ တယ်ညီမ လာခဲ့ပါ”..။ လူငယ်တွေ အတွက်ကျင်းပပေးတဲ့ပွဲလေးမို့ လာရောက် အားပေးစေ လိုကြောင်း အကြောင်းပြန်စာ ရလို့ အံ့သြ၀မ်းသာစွာ နဲ့သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ပရိတ်သတ်တစ်ဦးအနေနဲ့ပေါ့။)
သမီးစံ ဒီပွဲကို တစ်ယောက်တည်းမသွားရဲပါဘူး။(သတ္တိခဲပဲနော်) ဒါ့ကြောင့် သူငယ်ချင်း သုံး ယောက်ကို နှစ်ရက်ကြိုတင် (လိုက်ခဲ့ပေးဖို့) ညှိထားခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်း၊ မထောက်မစွာ နဲ့ပဲသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က အရေးပေါ်ကိစ္စတွေပေါ်လာလို့ မလိုက်နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ တော်သေးတာပေါ့ရှင်..တစ်ယောက်ကျန်ခဲ့လို့ပေါ့။နို့မို့ဆို သမီးစံတစ်ယောက် ဒီပွဲလေး နဲ့ဝေးရ အုံးမှာ။ဒါ့ကြောင့်...သည်းညည်းခံပြီး လိုက်ခဲ့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်း ဒီနေရာ ကနေ ကျေးဇူး တင်ကြောင်း ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်။ (ကိုယ့်မှာအဲဒီ့အကျင့်က လည်းတစ်မှောင့်.. ဘယ်သွားသွား တစ်ယောက်ယောက်ပါမှ..ကျန်တဲ့နေရာမှာသာတစ်ယောက်ထဲ ချဲတာ။ လူများပြီး နေရထိုင်ရ ခက်မယ့်နေ ရာမျိုးဆို တစ်ယောက်တည်းမသွားရဲဘူးရှင့်းP )။ဖြစ်မယ့်ဘလော့ဂါ.. အသွင်တစ်မျိုး ဆိုသလို ပေါ့ရှင်. ကိုယ်ကနိုင်ငံကြော်ဖြစ်မယ့်သူဆိုတော့လည်း သွားလေရာဘက်စ်မန်းပါမှ :D။(ဖျာခင်းလိုက်တာပါ.စိတ် ဆိုးတော်မမူကြပါနဲ့ရှင်.. ကြုံတုန်းလေးပြောရတာ :P )
ဟုတ်ကဲ့..ပရိတ်သတ်ကြီးရှင်(အဆိုတော်တွံတေးသိန်းတန်အသံနှင့်ဖတ်ပေးပါရန်)..သမီးစံတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သွားဆော့..အဲလေ..သွားရောက်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးကတော့ ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင်အနီး ၊တော်ဝင်နှင်းဆီခြံ၊ သီရိ ခန်းမ...မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ "ဖူးငုံ"ဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ကိုးနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်း အနား ပဲဖြစ် ပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲလေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကဏ္ဍအသီးသီးကို အသက် ၀င်နေ အောင် ကဏ္ဍအသီးသီးမှာပါဝင်တင်ဆက်နေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပုံဖော် တင်ဆက်တဲ့ မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်ရဲ့ ပွဲ လေးဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ဒီပွဲကတော့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေနဲ့ သိပ်မအပ်စပ်တဲ့ သမီးစံအတွက်တော့ ပထမဦးဆုံး စာနယ်ဇင်းအတွေ့အကြုံဖြစ်သလို... ဗဟုသုတတွေ အများကြီး ရခဲ့တဲ့ပွဲလေးပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့..သမီးစံတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် (မေးရင်းစမ်းရင်းနဲ့) တော်ဝင်နှင်းဆီခြံရောက်တော့ လူတော်တော် များများ ရောက်နေပါပြီ.(နည်းနည်းတော့လန့် သွားပါတယ်.. အားလုံးက လူကြီးလူကောင်းတွေကိုး၊)။နောက်တော့ခပ်တည်တည်နဲ့ပဲ Reserved စာတန်းပါတဲ့ ခုံတစ်ခုံမှာ နှစ်ယောက်သား ၀င်ထိုင်လိုက်ပါတယ်..။
ကဲ..အခုချိန်ကစလို့...Blogger သတင်းထောက် သမီးစံ တစ်ယောက် စပြီးတော့ သတင်းတွေ ရယူတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ :P
ဆက်လက်ပြီးတော့...ဖူးငုံဆယ်ကျော် သက်မဂ္ဂဇင်း (ခေါ်)သက်ဝင် နေတဲ့မဂ္ဂဇင်း နှစ်ပတ်လည်ရဲ့ ကဏ္ဍ အသီးသီးမှာပါဝင်တဲ့အခန်းများကဏ္ဍကိုဓာတ်ပုံနှင့်တကွတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
(ဓာတ်ပုံတွေကတော့ သည်းခံပြီးကြည့်ကြပါရှင်..အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အပြင် တော်တော်လည်း“၀ါး”နေလို့ပါ။)
အ၀ါရောင်ပဲသုံးတာများပါတယ်။(သမီးစံကတော့ စာလုံး Design ကိုတော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။)
ပထမဦးဆုံး ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းရဲဝိုင်းတော်သားများမှ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ကဗျာလေးကို အင်္ဂလိပ်လို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်သီဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ ၀ိုင်းတော်သားတွေက စင် အပြည့် ပါပဲ အားလုံးဝိုင်းရိုက်ကြတော့သမီးစံလဲ မိတာလေးပဲရိုက်လိုက်တာ သုံးယောက်ပဲပါပါတယ်။
အားလုံးက လူငယ်လူရွယ်လေးတွေချည်းပါပဲရှင် ဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းလို့
အခမ်းအနားမှူးကတော့စာရေးဆရာ“ညီမင်းညို”ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး အခမ်းအနားမှူးမှ ဒီအစီအစဉ် တင်ဆက်မှုဟာအသက်ဝင်နေတဲ့မဂ္ဂဇင်းရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်မှုဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာမဂ္ဂဇင်းရဲ့“မာတိကာပါ”တဲ့။
ထို့နောက်အခမ်းအနားမှူးမှပဲ “ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်”အဖြစ်..ကဏ္ဍအသီးသီးအတွက် တင်ဆက် ချိန်မှာဆယ်မိနစ်.ပရိတ်သတ်များ ထဲမှတင်ဆက်သွားတဲ့အစီအစဉ် အပေါ် “ပါဝင်ဆွေးနွေး” ခွင့်ငါးမိနစ်ကိုပါ ထည့်သွင်းစီစဉ်ထားပါကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ပရိတ်သတ်နဲ့ဖက်တူညီတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့ရှင်။
ပထမဦးစွာ အခမ်းအနားမှူးမှ teen magazine ၀ိုင်းတော်သားများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အသက်ဝင်နေတဲ့မဂ္ဂဇင်းရဲ့ တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်တွေကိုပြောပြပေးပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့...အခမ်းအနားမှူးမှမဂ္ဂဇင်းရဲ့..တာဝန်ရှိအယ်ဒီတာတစ်ဦးဖြစ်သူဆရာမ..မသီတာ (စမ်းချောင်း) ရဲ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်းဖတ်ပြကာ ဆရာမ အားစင်ပေါ်သို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ (အခမ်းအနားမှူးမှ အစီအစဉ်တစ်ခုမတင်ပြမီ စီစဉ်တင်ဆက်သူ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အရင်ဖတ်ပြပါသည်။) အခမ်းအနား မှူးရဲ့ဖတ်ကြားချက်အရ.ဆရာမ မသီတာ(စမ်းချောင်း)ဟာ ၁၉၆၆ ခုနှစ်ဖွားဖြစ်ကာ ဟားဗတ် တက္က သိုလ် မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်တွင်လည်း ဆရာဝန် တစ်ဦးဖြစ် ကြောင်း ကိုပါ လေးစားစွာသိမှတ် လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
၀တ္တုတို၊၀တ္တုရှည်များကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ်ရေးသားကာ.“နေ၀န်းနီကာရံများ”ဟု အမည်ရသော စာအုပ်တစ်အုပ်လောလောဆယ်ထွက်ရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။
ဆရာမကလည်း ဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းရဲ့အယ်ဒီတာဆိုတဲ့အတိုင်း အသက်အရွယ်နဲကမလိုက်အောင် တတ်ကြွ၊ဖြတ်လတ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဆရာမရဲ့အမှာစကားထဲမှ မှတ်ထားမိလိုက်တာကတော့ မိဘ တော်တော်များများဟာ သားသမီးတွေကို သူတို့ရဲ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှ မလွတ်မြောက်စေ ချင်တဲ့ အကြောင်း၊ ဒီ..“ဖူးငုံ”.မဂ္ဂဇင်းဟာ လူငယ်တွေကို မိဘရဲ့အုပ်ထိန်းမှု အောက်ကလွတ်မြောက်ကာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် နှင့် မိမိဘ၀ ကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း. ..စသည်.စသည်ဖြင့် အမှာစကားထဲမှာ ထည့်ပြော သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သမီးစံနားလည်၊မှတ်မိ သလောက်ပြန်ရေးထားတာပါ..။ လူငယ်တွေအပေါ် ထားတဲ့မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အများကြီးပြောသွားပါသေးတယ်ရှင်..
အခုမှ အသစ်စက်စက် သတင်းထောက်ဆိုတော့ အသံဖမ်းစက်လည်း “ပါ” မသွားဘူးရှင့်..။ဒါ့ကြောင့် အလုံးစုံမမှတ်မိတာကိုခွင့်လွှတ်စေချင်ပါသည်။ (အမှန်ကတော့ မ၀ယ်နိုင်လို့ပါ ။)
ဒါကတော့ Cover Story Contents အတွက် သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေနဲ့Teen Magazine ရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာ အောင်ကျော်မိုး(New Image)တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုပါ။တကယ်အသက်ဝင်တဲ့အစီစဉ်ပါပဲရှင်။
ထို့နောက်အခမ်းအနားမှူးမှကဗျာကဏ္ဍအတွက်ကြေငြာလို့အပြီးမှာ စာရေးဆရာမြေမှုန်လွင်ရဲ့ “သာရေး၊နာရေး”ကဗျာကို အဆိုတော် သားစိုး၊ဒေးဗစ်ဘေတာတို့မှ မိုက်ကက်ဂျက်ဆင်ရဲ့“နာရေး”ပုံများကို အသုံးပြုကာ..တီးလုံး တွေနဲ့ “မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင်” ဆိုသွားလိုက်တာ သမီးစံတစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက် ဖို့တောင် မေ့လျော့သွားလေရဲ့..။
ဒါ့ကြောင့် ဒီအစီအစဉ်အတွက် သမီးစံမှာ ဓာတ်ပုံပြစရာသက်သေမရှိကြောင်းပါရှင်း)။ (သည်းခံကြပါရန်)
(တစ်လမ်းလုံးအဲဒီ့အတိုင်း“မ”သွားတော့မကောင်းဘူးလားရှင် :P )
ပြီတော့..ပရိတ်သတ်များရဲ့ ငါးမိနစ်စာကဏ္ဍမှာ မောင်ငယ်တစ်ယောက်က သူ့ကဗျာလေးကို ရွတ်ပြသွား ပါသည်။ကဗျာတိုလေးဖြစ်ပါတယ်။သမီးစံမမှတ်မိတော့ပါ။အဲ.သူ့ကလောင်နာမည်လေးတော့မှတ်မိလိုက်ပါတယ်။“ထက်မြတ်”တဲ့။ (အင်း..ဒီသတင်းထောက်တော့ အလုပ်ပြုတ်တော့မှာပဲနော်)
ဆက်လက်ပြီး..“အုတ်တချပ်၊သဲတစ်ပွင့်”ကဏ္ဍအတွက် ဆရာမသင်းပပနှင့် ဆရာမခင်ဆုမြတ်ထွန်းတို့မှ “မသန်သူနှင့်စွမ်းသူ”ခေါင်းစဉ်လေးဖြင့်ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ညီမငယ် မေဇင် အောင်၊ နောက်ထပ်မောင်ငယ်တစ်ဦး(အမည်မမှတ်မိ) တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းတင်ဆက် သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ညီမငယ်မေဇင်အောင်မှာ မသန်စွမ်းသူဖြစ်သော်ငြားလည်းဘ၀ကို တန်ဖိုးရှိစွာ ဖြတ်သန်းနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
မသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့်လည်းဘ၀ကိုစိတ်အားငယ်စွာမဖြတ်သန်းပဲ“Dream Do Come True” လာစေရန်ကြိုးစားသင့်ကြောင်း..စသည်ဖြင့်.ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်ရှင်။သမီးစံလည်း ဆွေးနွေးမလို့ “ထ” ရပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်အရပ်ကပုတော့ မမြင်ကြဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ဟိဟိ
(နောက်တာပါ တကယ် “မဆွေနွေး” ခဲ့ပါဘူး။)
(၀တ္ထုထဲကအတိုင်းဂျပန်ပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးနဲ့ ဂျပန်အဖွားအိုတို့ရဲ့ ပြောစကားများနဲ့အသက်ဝင်စွာတင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်)
ထို့နောက်..ပရိတ်သတ်အတွက်ငါးမိနစ်ကဏ္ဍမှာဧည့်သည်တော်တစ်ဦးမှ နိုင်ငံတော်၏ မဏ္ဍိုင်ကြီးလေး ခု ဖြစ် တဲ့မီဒီယာအခန်းကဏ္ဍဟာပြည်သူများအတွက်အရေးကြီးပါကြောင်း..။ဒါ့ကြောင့် မီဒီယာများ အနေဖြင့် လည်း ပြည်သူများအတွက် တတ်နိုင် သလောက်ပံ့ပိုးပေးစေလိုကြောင်း ..ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။
ဒီပုံကတော့..နောက်ထပ်ပရိတ်သတ်တစ်ဦးမှ.ပထမတစ်ဦးရဲ့အမြင်အတွက် တိုးတက်နေတဲ့ဒီ ခေတ်ကြီး ခုခေတ်ကအွန်လိုင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူတိုင်း “မီဒီယာသမား” ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးတင်ဆက်သွားတာကတော့ ဆရာမ“ဧကရီဗိုလ်” ရဲ့“ကမ္ဘာကျော်များရဲ့လက်ရာ များ”ခေါင်းစဉ်အောက် က ခေါင်းစဉ်ခွဲဖြစ်တဲ့“ကမ္ဘာသိမိန့်ခွန်း”ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်..အသက် ၁၃ နှစ်သာရှိသေးသည့် ကလေးငယ်မှ ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းကို ဆရာမ ဧကရီဗိုလ်မှ ဘာသာပြန်..တင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အားကျ၊အတုယူဖွယ်ပါပဲရှင်။
ကဲ…သမံစီး…“နင်ဘာလုပ်မလဲ” သူများသားသမီးတွေ ဆယ့်သုံးနှစ်နဲ့ကမ္ဘာသိနေပြီ။(ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆုံးမ)
အဆိုတော်များဖြစ်ကြတဲ့ “သြရသနဲ့စန္ဒီမြင့်လွင်”တို့မှ ဆရာမမြတ်သီတာလွင်၊ ဆရာမခြူးဟန်ကျော် တို့နဲ့စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့သီချင်းလေးအတွက် သြရသ မှ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပုံ လေးကို အင်တာဗျူးတစ်ခုအနေနဲ့ တင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့အကြွေးလေး မနက်မှပဲ ဆပ်ပါရစေရှင်း)
at September 29, 2011 13 comments:
မီးဆံကုန်ပေမဲ့ ကိုယ်ဟာ မီးမတောက်ခဲ့သူ
ဒုန်စိုင်း ထွက်ခဲ့ရသူပါ ..
အသတ်ခံခဲ့ ရသူ ...တစ်ယောက်
ဘာနဲ့မှ မငြိတွယ်အောင် ကိုယ် နေထိုင်တက်ပါပြီလေ ..။
ရေးသူ - ည
မှတ်ချက်။ ။ ကဗျာလေးနဲ့မဆီမဆိုင်..ခုတလော အပျိုကြီး အိမ်ကလူတွေကို ပေါက်ကွဲနေပါသည်။
at September 27, 2011 17 comments:
ဆက်လက်ရှုစားအားပေးတော်မူကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ :D
အဲဒီနေ့က ကျမဘ၀အတွက် အပျော်ဆုံးနေ့လေးပေါ့.....ကျမ အချစ်တွေကို
သူ...ကျမတို့ ကျောင်းကို စပြောင်းလာတဲ့နေ့လေးပေါ့.....။
ကျမလေဆရာတွေစာသင်ချိန်မှာတောင်သူ့ကိုငေးကြည့်ရင်းရင်ထဲတိုးတိုးချစ်လာရသူပါ....။ သူကတော့ကျမကိုရှိတယ်လို့တောင်မထင်ဘူး။ကျမကိုမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှရှိတယ်လို့ မထင်တာ။ ကျမ လည်း ဒါလေးကိုပဲ ချစ်နေရတာ။
တခြားမေဂျာက ကောင်မလေးတွေကတောင် လာလာကြောင် ကြသေး တယ်။ မြွေမြွေချင်း ဆိုတော့ ခြေမြင် တာပေါ့။ သူတို့က လည်း ကျမရင်ထဲက မောင်ရဲ့အချစ်ကို လိုချင်နေ ကြတာ လေ...ကျမ မသိဘူးများ ထင်နေကြလား။ ကျမလက်ဦးမှကိုဖြစ်မှာပေါ့။ ကျမ ဘယ်လိုလုပ် ရမလဲ။ အင်း...ရေလာမြောင်းပေးရမှာ ပေါ့။ မိန်းကလေးတန်မဲ့သူ့ကိုရေလာမြောင်း ပေးလုပ်မိပါတယ်။ နေ့ခင်းဘက်ဆို သူထိုင်တဲ့ ကင်န်တင်းရဲ့ သူ့အရှေ့ စား ပွဲ ၀ိုင်းမှာထိုင် သူ့မျက်နှာ လေးကို ငေးကြည့်။ ဒါကျမနေ့စဉ်လုပ်နေကြ လုပ်ငန်းစဉ်လေးပေမယ့် သူကတော့ သတိထားမိပုံကို မပေါ်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ စာသင်နှစ် တစ်နှစ်ကုန်ခါနီးတော့မယ်။ အခြေအနေက တိုးတက်လာမှုကို မရှိဘူး။
ကျမချစ်ရတဲ့ မောင်ရေ.....မောင့်မှာ ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားကောရှိရဲ့လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်ရယ်...မောင့်ရဲ့အချစ်ကို ကျမရမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ကျောင်းတက် ရမှာ နောက် ဆုံး နေ့လေ။ ဒီနေ့ကျောင်းတက်ပြီးသွားရင်နောက်ရက်တွေစာမေးပွဲဖြေ၊ နောက်ဆုံးနှစ်ဆို တော့ မောင့် မျက်နှာလေးကိုတွေ့နိုင်ဖို့ အတွက် မောင့်အ ချစ်ကို ကျမရမှဖြစ် တော့မယ်။ မောင်ဖွင့်မ ပြောရင် ကျမ မောင့် ကို ချစ်ပါ တယ်လို့မိန်းကလေးတန်မယ့်လာပြောတော့မယ်။
ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ မောင်...လာတတ်တဲ့ လမ်းကလေးကနေ မောင့်ကို ကျမ စောင့်နေ လိုက် တယ်...ဒီနေ့ မှမောင်ရယ်..နောက်ကျလိုက်တာ.....လာပါတော့...
မောင်လာနေပြီ...အရင်က မောင်လာရင်ဘေးမှာ အဖေါ်တစ်ယောက်ပါနေကြ။ အခု ကံကြမ္မာက ကိုယ့် ဘက် ကို လိုက်နေ လို့လားမသိ။ မောင်တယောက်တည်း။မောင်ရေ....မောင်ကို ချစ်တယ်...ကျမ ဘယ် လို ဖွင့်ပြော ရမှာလဲ၊ ကျမတခုခုဖြစ်နေဟန် ဆောင်လိုက်တယ်။
မောင်..လှည့်ကြည့်တယ်။ကျမနှလုံးသားတွေအရည်တွေပျော်ကုန်ပါပြီ..မောင်ရယ်...ဒါပေမယ့် မောင်က ဒီအတိုင်းပဲလှည့်ထွက်သွားတယ်။ မောင်ရယ်...ရက်စက်လိုက်တာ....၊၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မောင့် ကို ကျ မ ချစ်နေကြောင်း မောင် သိအောင် ဖွင့်ပြောရမယ်။
"မှောင်" (မခို့တရို့နဲ့ … :P)
အရဲစွန့်ပြီး ကျမလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ မောင်လှည့်ကြည့်တယ်။ ကျမ..မောင့်ကိုအပြုံး တစ်ခု လက် ဆောင် ပေး လိုက်တယ်။ မောင်...ကျမ ကို ရက်ရက်စက်စက်စကားတခွန်းပြောပြီး လှည့် ထွက်သွား တယ် ။မောင်ရယ် ရက်စက်လိုက်တာ.....မောင်...လုပ်ရက်တယ်။မှောင်....မှောင်...ကျမကို ဒီ လိုမျိုး မပြောသင့်ပါဘူး။
“ မလွမ်းရဲသေးဘူးမှောင်ရယ်…ကုလားနဲ့မထားခဲ့ပါနဲ့….” ရယ်လို့...။
သမီးစံကျောင်းမှာဘာလုပ်ခဲလဲသိချင်ကြဘူးလားဟင် ..! အဲဒီ့နေ့က သမီးစံ ကျောင်းမှာ “ပိုကာဆွဲ”.. အဲလေ
ကျောင်းကြီး ကို ဓာတ်ပုံ ပတ် ရိုက်နေ တယ် လို့လေ..တ ကယ်တော့ ကိုယ် လည်းကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ် ကုန်ကြမ်း ရှာနေရတာ သူတို့လေးတွေမှ မသိကြတာကိုး နော..။ လျှောက်ရိုက်တုန်းကတော့ ဟိုလူကကြည့် ဒီ လူ ကကြည့်နဲ့ တော်တော်လေးအနေ ခက် ပါတယ်ရှင်။(ဘလော့ဂါလုပ်ရတာ အဲဒီ့အခက်အခဲလေးတော့ရှိလေ ရဲ့ နောက်တော့နေသားကျ သွားမှာ ပါလေ နော်)။သူငယ်ချင်းတွေကလည်းမေးကြတယ်..နင်က လူတွေ မရိုက်ပဲ ကျောင်းကိုပဲ ရိုက်နေတယ်..ဘာလုပ်ဖို့လဲတဲ့...။ပြောလိုက်ချင်ရဲ့.“.ငါကဘလော့ဂါလေလို့” အဲ လိုပြောရင်.. သူတို့က နားလည် မှာမ ဟုတ်ဘူး...။မျောက်ကို အုန်းသီးကျွေးသလို ပဲဖြစ်နေ မှာလေ..ဟီးးးးး။(အမှန်ကတော့ သူတို့ကောင်း လို့ ဒီ လိုရိုက်ခွင့် ရခဲ့တာပါ။ ဟိုဟာကလှတယ် ဒီမြင်ကွင်း က မကောင်းဘူးနဲ့ အကြံပေးကြလို့ပါ။)သမီးစံ သူငယ်တန်းကနေ ခုချိန်ထိ သူငယ်ချင်း ကံကောင်း ပါတယ် တွေ့တဲ့သူအားလုံးက ကိုယ့်အပေါ် တစ်နည်းနည်းနဲ့ အနစ် နာခံကြသူ ချည်းပါပဲ ။ပြော မနာဆို မနာတွေပါ။အဲဒီတော့ သမီးစံက ဆိုးပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ် တစ်ခုခုပြောမှားဆိုမှား ရှိခဲ့ရင် ၊ ရှိလာရင် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ ကြိုတင်တောင်း ပန်ထား ပါရစေ။ကိုယ် ဆက်လျှောက် ရမယ့် ဘလော့ဂါခရီးက အရှည်ကြီးကိုးးး သမီးစံကို“စ”ရင်လည်း လုံးဝစိတ်မဆိုးတတ် ပါဘူးဆို တဲ့အကြောင်း .. သတင်းကောင်းပါး အသိပေးထားပါရစေရှင်။အရမ်းကြီးလဲ မ“စ” ပါနဲ့နော်..။ အသည်းငယ် တတ်လို့ပါ..။ (အပျိုကြီးဖြစ် မယ့် လူ ဆိုတော့ လည်း....း))
ကဲပါလေ.....ကြော်ငြာဝင်နေတာနဲ့ လိုရင်းကိုမရောက်တော့ဘူးး)။
မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ (ကြွားတာဟုတ်ပါဝူးနော် အဟမ်း...အဟမ်း !) ဒီကျောင်းကြီးက ပြီးခဲ့ တဲ့နှစ်ကမှ ဆောက် လို့ပြီးသွားတာပါ။ အားလုံးပေါင်း မြေညီထပ်အပါအ၀င် အထပ်သုံးထပ်ရှိပါတယ်။နာ ဂစ်ပြီးမှ ဆောက် တဲ့အဆောက် အဦးဆိုတာ မြင်တာနဲ့သိကြမှာပါ။( လေးဖက်လေးလံ အပေါက်တွေ ချည်းပဲကိုး) ၊ဆောက်ထား တာ အင်မ တန်စနစ် ကျပါတယ်။ (မိုးအရမ်း ရွာ ရင်တော့ ကော် ရစ် တာ ကို မထွက်ရဲဘူး မလုံလို့ ..ဟိ..)။ကြားမိလိုက်ကြတယ်မှတ်လား..ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လလောက် က တောင်ကြီးအေး သာ ယာကျောင်းကြီး ပြိုသွားလို့ဆိုပြီးတော့လေ။(ပြောပြရင်လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းသ လိုပါ ပဲလေ ပြောတော့ ပါဘူး ။)ဟုတ်ကဲ့..ဒီနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးကတော့ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သန်လျင်မြို့စွန်မှာ တည်ရှိကြောင်းပါရှင်။ရန်ကုန်ကသွားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နာရီတိတိကား စီးရပါတယ်။ မနက်ရှစ်နာရီခွဲမှာ ကျောင်းတံခါးပိတ်ပါတယ်။သမီးစံတို့ဘယ်တော့မှမမှီပါဘူး။ကိုးနာရီမှကျောင်းကိုရောက်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်မလွယ့်တလွယ်အပေါက်ကကျော်တက်ရပါတယ်။(အဲဒီ့အပေါက်ကိုတောင်ရိုက်မလို့ သူငယ်ချင်းတွေ က ၀ိုင်းဆွဲထားကြလို့)း)။ဆိုးပါတယ်ဆိုနေ....... ။ညနေကျတော့ သုံးခွဲလွှတ်ပါတယ်။ ဖယ်ရီကားတွေကေ တာ့ လေး နာရီ မှထွက်ပါတယ်။ကျောက် တန်းရေလယ် ဘုရားနဲ့လည်းနီးနီးလေး.ရယ်.။ ကားခငါး ဆယ်ပဲပေး ရတယ်။ ထန်းရည်ဝိုင်းကလည်းပေါလို့ အဲ. ဖွာတေး..( ဘာတွေလျှောက်ပြောမိနေပါလိမ့်)။ ပါချုပ် နာမည် ကတော့ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်မြတ် ဖြစ်ကြောင်းပါ။မော်ကွန်းထိန်းနာမည်ကတော့ ဒေါက်တာထွန်းထွန်းပါ။
ဒုတိယမော်ကွန်းထိန်းကတော့ မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်း . အဲလေ. ဒေါ်ခင်စန်းဝင်းဖြစ်ကြောင်းပါ။
ဒီပို့စ်ရေးခါနီးမှနာမည်တွေမေးလာတာ..ဟိဟိ။ကြော်ငြာဝင်ပါရစေ..။ပါချုပ်ကြီးက လူပျိုကြီးပါ။ သူ့ရှေ့မှာ သမီး ရည်း စားနှစ်ယောက် လက်တွဲပြီးလျှောက်သွားရင်တောင် မိဘခေါ်တတ်လေ့ရှိတဲ့ သဘော ထားပြည့်ဝ သူကြီးပါ။းP
ဟုတ်ကဲ့.... .ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ ကျောင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖူလှုံသွားပါပြီ။ဆက်ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံများ နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ..............။
ဒီနေရာက ကျောင်းဘဏ်ဏာရေးကနေလှမ်းရိုက်ထားတာပါ အမိုးချွန်ချွန်နဲ့အဆောက်အဦးလေးကတော့
(သိတယ်မှတ်လား ရိုက်တာတောင်အဝေးကလှမ်းရိုက်တာ အနားတောင်မသီဘူး ဟိဟိ)
အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းလို့ နောက်တစ်ပုံထပ်ရိုက်ထားတာ !
ဒါကတော့ work shop တွေပါ။ဘာတွေသင်လဲ?ဟုတ်လား..
ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းပြီးသွားရင် ဘ၀င်မမြင့်အောင်၊အောက်ခြေကနေ“သွားတတ်အောင်”
အချောမသတ်ပဲ ကျောက်ခဲတွေဖြည့်ခင်းပေးထားတာပါ။း)
ညနေကျောင်းဆင်းရင် ကျောင်းသားတွေ ဖယ်ရီစောင့်ရင်း ဘောလုံးကန်တဲ့နေရာပေါ့။
ဒါကတော့ အပျိုကြီးတို့အတွဲ..အဲလေ..ဟုတ်ပါဘူး အပေါ်ဆုံးထပ်လှေကားကနေလှမ်းရိုက်ထားတာပါ။
ဒီပုံကလည်း ဟိုးးးးးးးး အပေါ်ဆုံးထပ်ကနေလှမ်းရိုက်ထားတာ
သမီးစံနောက်က အခန်းမှာ ME တွေစာသင်နေတယ် (ရှုး တိုးတိုး )
ဘွဲ့နှင်းသဘင် ဘေးတံခါးပါ ဘေးနှစ်ဖက် မှာနှစ်ပေါက်စီ နောက်မှာတစ်ပေါက်
အားလုံးငါးပေါက်ပေါ့နော် (ပိုကာဆွဲတာဟုတ်ဘူးနော်)အခုမြင်ရတဲ့အပေါက်ကတော့ ဘေးပေါက်ပါ
အခုမြင်နေရတာကတော့ “ကွန်ပျုတာ Room” လို့ခေါ်ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရပြောရရင်..အဲဒီ့နေ့မှ ဖွင့်ထားတာပါ။ဆရာမနှစ်ယောက်ဝင်ပြီး ပါဝါကြိုးတွေဖြုတ်ရောင်း
သမီးစံလည်း အလွမ်းပြေ သေချာကြည့်ခဲ့လေရဲ့...။
ဒါကလည်း ဟိုးအပေါ်ဆုံးထပ်ကနေ လှမ်းရိုက်ထားတာပါ ရှေ့တည့်တည့်က အမိုးချွန်အဆောက်အဦးကတော့
ဘဏ်ဏာရေးငှာနဖြစ်ပါတယ်။ စောစောကသမီးစံရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာက ဘယ်ဘက်ကရေရင်နှစ်ပေါက်မြောက်ပေါ့။
ဒီစေတီလေးကတော့... ကျောင်းက မ တည်ပြီး တည်ထားတဲ့ ကျောင်းရဲ့ စေတီလေးပေါ့ရှင်
ဒါက ကန်တင်းသွားတဲ့လမ်းပါ။အစိမ်းရောင်အမိုးနဲ့ ဖျင်တဲလေးကတော့ သစ်ပင်ပေါက်လေးတွေ
ဒါက ကျောင်းရဲ့ အနောက်ဖက်မြင်ကွင်း စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ လှတယ်နော်.. မိုးရာသီဆိုရင်တော့
မြွေနဲ့တစ်ခါတစ်ခါတိုးလေရဲ့း) (မကြောက်ပါနဲ့ မြတ်လျှောလေးပါပဲ :P )
မိန်းထဲမှာဆို အဓိပတိလမ်းပေါ့နော်! ဒါက ကျောင်းဆောင်အဟောင်းရဲ့အ၀င်လမ်းပါ။
ဘက်စ်ကားဂိတ် (ရှေ့ကတစ်ယောက် ကားခရှာနေတယ် လွယ်ရင်ထုတ်ပေးလိုက်ပါဦးနော်)
မောင်ချင်းတို့၊အိပ်ရာတို့၊မြစ်ဆုံတို့ဆို ဘာပြောကောင်းမလဲနော်။ :)
ဒီအဆောင်က အာခီဆောင်ပါ။ ပထမနှစ်ကနေ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ အဲဒီမှာပဲတက်ရပါတယ်။
သူတို့က ပုံမှန်မဟုတ်တော့လေ သိတယ်မှတ်လား !
အဆောင်သပ်သပ်ခွဲထားရတယ် ။း)
စီမံရေးရာငှာနပါ။ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းနာမည်က ဦးတင်မြင့်တဲ့ သမီးစံအဖေပေါ့။း)
တစ်ချို့ကလည်း ခေါင်းဖြူကြီးလို့ခေါ်ကြလေရဲ့..။သမီးစံတို့ကတော့ ဦးကျော်ဟိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။
စီနီယာ အစ်မတစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်တရ
(အဟမ်း..အဟမ်း ! ကြော်ငြာ )
“ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပါ” အဲလိုပဲ အခန်းအနားမရှိရင်တော့ ဂိုထောင်ပါပဲ။
အဲဒါတွေမကြိုက်တာပေါ့ ...ဟွင်း။(ထည့်ထားတာက Drawing ခုံတွေပါ။)
ဒါက အိမ်ပြန်ဖို့ ကားစောင့်ရင်းနဲ့ ရိုက်လိုက်တာ ..။
အထဲက ကျောင်းခေါင်းစီးက အကြီးကြီးဆိုတော့ အပြင်ကမုဒ်ဦးလေးက
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)မှာ သင်ကြားပေးတဲ့ ဘာသာရပ် (၁၀)ခုရှိပါတယ်။
(၁)အလကားနေအလကား Drawing ခဲတံပဲချွန်၊ အချိန်ပြည့်ပုံပဲဆွဲနေရတဲ့.. Archi Major
(၂)“ဘိလပ်မြေတစ်ဆ၊သဲငါးဆ” ဆောင်ပုဒ်အတိုင်းမပျက်မကွက်လိုက်နာတဲ့ Civil Major
(၃)ပျက်တဲ့စက်ကိုပြင်ရင်“ဆုတ်”၊မကောင်းတဲ့စက်ကိုပြင်ရင်“ပစ်”ရတဲ့ Mechanical Major
(၄)မီးလာနေတုန်းပလတ်ပေါက်ထဲလက်ထိုးထည့်ရင်တစ်သက်လုံးလေမဖြတ်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ EP Major
(၅)Circuit ဆင်တယ် ပြီးရင်ပျက်တယ်၊ဆင်တယ်ပျက်တယ်.လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတဲ့ EC Major
(၆)Program တွေကို အလွတ်ကျက်တဲ့နေရာမှာ “ပြိုင်စံရှား”တော်တဲ့ Information Technology Major
(၇)စက်ရုပ်တွေအကြောင်းသင်တယ်။ Robot ဆိုတာဘာလဲမေးရင်မသိတဲ့ Mechatronics Major
(၈)ဓာတုပစ္စည်းတွေအကြောင်းသင်တယ်၊ဘီယာချက်တာသင်တယ်။ပြီးရင်ကိုယ့်ဟာကိုမြည်းပြီးအမြဲမူးနေတဲ့ Chemical Major
(၉)ရာဘာနဲ့ပလတ်စတစ်အကြောင်းတွေသင်တယ်..။သင်္ကြန်ရောက်ရင်ကော်ခွက်တွေကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးရေပက်တဲ့ PR Major
(၁၀)ကျောင်းသားတွေ ပြောလို့ရရင်ရ မရရင် ရေနံလောင်းပြီး “........”တဲ့ Petrol Major
(စကားမစပ်...တစ်ကျောင်းလုံး “Queen”က Petrol Major မှာရှိပါတယ်။)
(သမီးစံ ဘာမေဂျာလဲ မမေးနဲ့ အလျော့ပေါ့ဆုံးရေးထားတာ ကိုယ့်မေဂျာပဲ ဟဲဟဲ )
“ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ၊ လူသွားတိုင်းဖိနပ်ပါ၊ လိုရာဆန္ဒများ တစ်လုံးတစ်ဝ ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်း ”
at September 23, 2011 27 comments:
ဘလော့ဂါသတင်းထောက် သမီးစံနှင့် အမှတ်ရဖွယ် Anniversa...
Blogger သတင်းထောက် သမီးစံနှင့်အမှတ်ရဖွယ် Anniversa...
Save The Ayeyarwaddy !